Appeak – The Free Poker Game 3.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.0 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
ဂိမ္းမ်ား ကဒ္ Appeak – The Free Poker Game
Appeak – The Free Poker Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သငျသညျခစျြလိမျ့မညျသောအခမဲ့ Poker App ကို။ ကစားသမားတွေသန်းပေါင်းများစွာမမှားမဖွစျနိုငျ!
အဆိုပါ Appeak တက္ကဆက်ပြည်နယ် Holdem အခမဲ့ Poker app ကိုထွက်ရှိပါတယ်အမြန်ဆုံးအများစုကပျော်စရာဆုံးနှင့်စိန်ခေါ်မှုအခမဲ့တက္ကဆက်ပြည်နယ် Holdem ဖဲချပ် App ဖြစ်ပါတယ် - နှင့်သင်စက္ကန့်, မနာရီအတွင်းကစားခြင်းကိုစတင်နိုင်ပါတယ်။
အချို့ video ဖဲချပ်ခေါက်-ချွတ်မရ - Appeak တက္ကဆက်ပြည်နယ် Holdem ကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖဲချပ်အခန်းပေါင်းအတွက်ကစားမယ့်သကဲ့သို့သင်တို့တက္ကဆက်ပြည်နယ် Hold'em ၏အစစ်အမှန်ခံစားပေးတဲ့အနည်းငယ် Holdem အခမဲ့ဖဲချပ် apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဤသည်ကို non-ရပ်တန့်မြန်မှုကိုတပြေးညီ Holdem အရေးယူနှင့်အတူ၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာအခမဲ့ဖဲချပ်ဖြစ်ပါသည်။ ရုံအခုဆိုရင်ခလုတ်ကို Play ကနှိပ်နှင့်သင်ချက်ချင်းအလောင်းအစားများနှင့်တိုက်ရိုက်ဖဲချပ်အဖြစ်နီးပါးအဖြစ်ကောင်းသောတစ်ဦး Play-ပိုက်ဆံဖဲချပ်ဂိမ်းထဲမှာမွေးမြူပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖဲချပ်တို့သည်လက်ခေါက်နှင့် Appeak app ကိုအနည်းငယ်အလေ့အကျင့်ပြီးနောက်အချိန်မအတွက်လိုလားသူများကဲ့သို့ဖဲချပ်လေးသာမှု crunching လိမ့်မည်။ ဒီ app (သင့်လက်ကဘာလဲဆိုတာကြည့်ဖို့လွယ်ကူစေသည်) four-color ကိုကုန်းပတ်များကဲ့သို့အရင်ကဆိုရင်အဘို့ကြီးသောအကူအညီနဲ့ features တွေကိုပံ့ပိုးနှင့် holdem စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအပိုင်း။
လောင်းကြေး, သေးငယ်သောအငယ်စား, အလတ်စားနှင့်ကြီးမားသောသို့ခွဲခြားထားပါသည်နှင့်သင်အလိုအလျှောက်နေ့စဉ်အပိုဆုကြေးငွေအတွက် 7000 အခမဲ့ချစ်ပ်အထိဝင်ငွေ။
1 သန်း + ဒေါင်းလုပ်! 100,000 Active ကိုကစားသမား! ပွင့်မှ 7000 Daily သတင်းစာ Chips!
ထို Appeak တက္ကဆက်ပြည်နယ်အခမဲ့ဖဲချပ် app ရဲ့အခွင့်အရေး့အနည်းငယ်:
• 100,000 ကျော်တက်ကြွသောကစားသမားများနှင့် 1,000,0000 ကျော် downloads,
• Up ကိုမှ 7000 အခမဲ့ချစ်ပ်ကိုနေ့စဉ်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုထည့်သွင်း
•ခုနှစ်တွင်-game ထဲကစိန်ခေါ်မှုများလျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ chip ကို stack ကြီးထွားဖို့
•ချက်ချင်းတက်စတင်ကာနယူးဂိမ်း, သင်၌ log အချိန်မရွေး
• (သင်မည်သည့်အချိန်တွင်မထွက်ခွာနိုင်သည့်) ငွေသားဂိမ်းများနှင့်အားလုံးကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဆင့်၏ကစားသမားတွေအဘို့စစ် & Go ကိုပြိုင်ပွဲကြီးနှစ်ဦးစလုံး
မိတ်ဆွေများနှင့်ပြိုင်ဘက်ကျော်လူ့အခွင့်အရေးကြွားဘို့တစ်သီးသန့် leaderboard •။
ကနေရွေးချယ်ဖို့က 40 မူထူးခြားတဲ့ရဲ့ Avatars ကျော်•
သင်ရုံတက္ကဆက်ပြည်နယ် Holdem ဖဲချပ်သင်ယူဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်သို့မဟုတ်သင်ပြီးသားလိုလားတဲ့ကစားသမားတွေဟာလျှင်အဘယ်သူမျှမနေပါစေ, သင်တို့အဘို့အဘယ်သူမျှမပိုကောင်းအခမဲ့ဖဲချပ် app ကို there`s
အတုအပဗီဒီယိုဖဲချပ် apps များအားဖြင့်အရူးလုပ်မရကြဘူး - ဒီကိုမှန်ကန် Holdem ဖဲချပ်ပါ!
Appeak – The Free Poker Game အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Appeak – The Free Poker Game အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Appeak – The Free Poker Game အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Appeak – The Free Poker Game အား အခ်က္ျပပါ
shakapp စတိုး 14 8.29k
Appeak – The Free Poker Game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Appeak – The Free Poker Game အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.appeakpoker.com/privacy.html
App Name: Appeak – The Free Poker Game
Release date: 2019-02-14 18:29:05
လက်မှတ် SHA1: CC:88:AF:52:4D:DB:2C:78:DF:84:BE:D5:E9:CA:AD:16:C7:31:73:E2
အဖွဲ့အစည်း (O): Appeak
Appeak – The Free Poker Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ